Nnwom 35 NA-TWI - Mmoa mpaebɔ - Tia wɔn a wotia me, - Bible Gateway
Nnwom 34Nnwom 36
Nnwom 35 Nkwa Asem (NA-TWI)
35 Tia wɔn a wotia me, Awurade, na ko tia wɔn a wɔko tia me! 2 Fa wo kyɛm ne wo nkatabo begye me. 3 Ma wo peaw ne w’abonnua so tia wɔn a wɔtaa me. Ka kyerɛ me se wubegye me. 4 Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no, di wɔn so na gu wɔn anim ase! Na wɔn a wɔyɛ adwene tia me no ma wɔnsan wɔn akyi na wɔn adwene nyɛ basaa. 5 Ma wɔnyɛ sɛ ntɛtɛ a mframa bɔ gu wɔ bere a Awurade taa wɔn no! 6 Ma wɔn akwan nnuru sum na emu nyɛ toro bere a Awurade bɔfo bɔ wɔn hwe fam no! 7 Wosum me firi kwa na wotuu amoa tenten sɛ mentɔ mu. 8 Nanso ansa na wobehu no na ɔsɛe akyere wɔn dedaw. Wɔn ara wɔn firi beyi wɔn na ɛde wɔn akɔ sɛe mu.